“Mbappé wuxuu ku biiri doonaa Real Madrid, wuxuuna in badan ka fiicnaan doonaa Cristiano Ronaldo” – Gool FM
“Mbappé wuxuu ku biiri doonaa Real Madrid, wuxuuna in badan ka fiicnaan doonaa Cristiano Ronaldo”
(Yurub) 23 Dis 2018. Agaasimihii hore ciyaaraha kooxda Monaco isla markaana haatan ka howlgala kooxda Lille ee Luis Campos ayaa sheegay in xidiga PSG ee Kylian Mbappé uu ku biiri doono kooxda Real Madrid mustaqbalka.
Luis Campos ayaa lagu tiriyaa inuu soo saaray dhoowr ciyaartoy da’ayar ah ee kooxda Monaco uu qeyb ka yahay Kylian Mbappé, wuxuuna ka mid yahay agaasimayaasha ciyaaraha ee ugu fiican sanadihii dhawaa ee lasoo dhaafay.
Mas’uulkan oo ka hadlayay mustaqbalka Kylian Mbappé ayaa wuxuu ugu horeyn sheegay.
“Kylian Mbappé waa ciyaaryahan kubada cagta ee heysta qaab ciyaareed heer sare ah, waxaan arkaa isaga oo xiran maaliyada kooxda Real Madrid, sababtoo ah waa koox xili kasta raadisa ciyaartoyda aadka u wanaagsan”.
“Waxaan qiyaasayaa in mustaqbalka uu dhex fariisan doono garoonka Santiago Bernabeu, waxaan daawadaa oo aan ku raaxeystaa qaab ciyaareedka Kylian Mbappé”.
“Maalmahan aan ku jirno Mbappé wuxuu ka go’aamin fiican yahay Neymar Jr, waxaana qabaa inuu in badan ka fiicnaan doono Cristiano Ronaldo, waxaan arkaa inuu ku guuleysan doono abaal marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or”.
“Waxaan wada xiriirnaa Neymar Jr, balse ma jiraan waxaan shaaca ka qaadayo” – Mid ka mid ah xidigaha Real Madrid
RASMI: Inter Milan oo Xaqiijisay inay Ciyaaraha ka joojisay xiddigeeda Radja Nainggolan!??...(Maxaa dhacay?)